Wednesday October 21, 2020 - 06:13:07 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya gobolka Gedo ee dhaca Koonfurta dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in weeraro safballaaran ah lagu miray saldhigyo ay ku suganyihiin ciidamada shisheeye.
Xoogag Jihaadi ah ayaa xalay fiidkii dagaal aad culus ku qaaday saldhigga ciidamada Kenya ee degmada Ceelwaaq, dadka deegaanka ayaa sheegay in iska hor'imaad aad uxooggan uu ka dhacay gudaha saldhigga ciidamada Kenya.
Daryanka madaafiicda iyo rasaasta laysku dhaafsanayay dagaalka ayaa laga maqlayay deegaanno ka baxsan Ceelwaaq, dagaalyahannada Al Shabaab ayaa garneellada garbaha laga gemo iyo boobayaal ku beegsaday saldhigga ciidanka KDF arrinkaas oo dagaalka sii adkeeyay.
ilo wareedyo laga helay gobolka Gedo ayaa sheegaya in ciidanka Kenya ay xalay fiidkii hawada ka saareen dhammaan isgaarsiinta degmada Ceelwaaq waxaana arrinkaas lagu macneeyay in ay qarinayaan khasaaraha kasoo gaaray dagaalkii xalay.
Dhinaca kale dagaalyahanada Al Shabaab ayaa xalay weerar culus ku miray saldhigga ciidamada Xabashida Itoobiya ee degmada Buurdhuubo gobolka Gedo.
Weerarka oo ka dhacay saldhig ku dhow buumdada Buurdhuubo ayaa sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac ah oo soo gaaray ciidamada Itoobiya ee laweeraray.